Ny finoan’ny ray aman-dreny, ohatra faka tahaka (2)
"Matokia an’i Jehovah…Hotahiny izay matahotra an’i Jehovah, na ny kely na ny lehibe. " Salamo 115:11,13
Somary gaga tamin’ny fizotran’ilay fitsangantsanganana izahay, ka nahatsapa fa mila miara-misaotra ny Tompo, noho iny fihaonana mahafinaritra navelany hisy iny.
Efa enimpolo taona mahery no nitrangan’izany, nefa mbola ao an-tsaiko ihany. Ny ray aman-dreniko, tamina toe-javatra maro hafa teo amin’ny fiainany andavanandro, dia nampahafantatra ahy ny tena atao hoe finoana sy ny valiny omen’ny Tompo izany; tena feno fankasitrahana azy ireo aho amin’izany.
Marina fa na velona toy inona aza ny finoan’ny ray aman-dreniko, dia tsy nampita tamiko ny aina na nahatonga ahy ho zanak’Andriamanitra. Tsy maintsy niaiky ho mpanota teo anatrehan’Andriamanitra aho, ary tsy maintsy nanatona an’i Jesosy, Ilay hany lalana nomen’Andriamanitra ny olona mba hanakaikezany Azy, mba ho voavonjy. Tsy maintsy niasa tao anatiko ny fahasoavan’Andriamanitra, ary tsy maintsy nahita akony tao am-poko. Ilaina ny asan’Andriamanitra, fa eo koa ny andraikitry ny ray aman-dreny. Alohan’ny zavatra rehetra, ny kristiana dia vavolombelon’i Kristy, ary nirahina hampahafantatra Azy. Raha nanankinan’Andriamanitra zanaka izy, dia ireo no sahan’asany voalohany. Inona moa no fijoroana voalohany ho vavolombelona asain’Andriamanitra ataon’ny ray aman-dreny? Ny mba ho ohatra faka tahaka : mampiseho fa isika dia manana mpampianatra tiantsika, ankatoavintsika, iresahantsika, mihaino sy mamaly antsika, ary izany rehetra izany dia mifamatotra akaiky amin’ny Teniny vakina sy hazavaina eo anivon’ny ankohonana.
Ry ray aman-dreny kristiana, raha iainantsika eo anivon’ny ankohonana ny finoana, dia hanazava ny foto-kevitra itaizana ny zanatsika, ary hanoro azy ireo ny lalana tian’Andriamanitra hitahiana azy ireo.